Ra'iisal Wasaare Khayre oo ka Jawaabay su'aalo ku saabsan Arrimaha dhismaha ciidamada | SAHAN ONLINE
Ra’iisal Wasaare Khayre oo ka Jawaabay su’aalo ku saabsan Arrimaha dhismaha ciidamada
MUQDISHO – Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay su’aalo lagu weydiiyey kulan ka dhacay xarunta Villa Hargeisa halkaasoo ay ka qeybgaleen Guddoonka Baarlamaanka,Guddiyada difaaca iyo Arrimaha gudaha ee Baarlamaanka.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa kulanka su’aalaha lagu weydiinayey waxa uu ku saabsanaa qorshaha dhismaha ciidamada ee ay mooshinka ka keeneen Guddiga difaaca Baarlamaanka kadib markii ay saluugeen qaabka loo dejiyey qorshaha amniga dalka.
Xildhibaanada ayaa su’aalo ka weydiiyey Ra’iisal Wasaaraha ,arrimaha dhismaha ciidamada iyo tirada maamul goboleedyada ay yeelanayaan taasoo ay sheegeen inay keeni karto xiisad la mid ah tii Galmudug iyo Puntland haddii ciidamo gaar ah sameystaan maamul-goboleedyada.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in qorshaha ammaanka dalka aanu saameyn doonin ciidamada qalabka sida ,wuxuu xusay in ciidamada la tayeynayo lana qalabeynayo.
Sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida loo dhisayo ciidamada,hannaanka loo wajahayo sugida amniga iyo arrimo kale oo isla amniga dalka ku saabsan ,waana ay ku qanceen.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa sheegay in qorshahan uu ahaa mid muddo socday ,ciidankana ay noqon doonaan kuwa la isku dhafo kadibana loo kala qeybiyo xeryihii ciidanka ee jiray xiligii dowladdii hore ee milateriga.